गुल्मीका तीन स्थानिय तह बने विपन्नका असली सरकार ! – ebaglung.com
गुल्मीका तीन स्थानिय तह बने विपन्नका असली सरकार !
२०७४ आश्विन २८, शनिबार ०६:१४	Top News, अन्य समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७४ असोज २८ । आर्थिक अभावका कारण वर्षऔं देखि खरको छानाको झुपडीमा रहेका विपन्न परिवारका जनतालाई टिनको छाना लगाई दिने निर्णय गरेर यहाँका तिन वटा स्थानिय निकाय ती जनताहरुका असली स्थानिय सरकार बनेका छन् ।
२०६४ देखि २०७० को संविधान सभा निर्वाचन सम्म हरेक दलका नेताहरुले ति जनताका खरको छानामा टिनको छाना लगाई दिने आश्वासन दिदै आए पनि पुरा गर्न सकेका थिएनन् ।
तर धुर्कोट गाउँपालिका ईस्मा गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिकाले ती जनताको खरको छाना विस्थापित गरी टिनको छाना लगाई दिन रकम नै विनियोजन गरेर काम सुरु गरे पछि असली सरकारको अनुभुति जनताले गर्न थालेका हुन् ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले दुई वर्ष भित्र खरको छाना रहित धुर्कोट बनाउनका लागि यसै वर्ष झण्डै डेड लाख रकम विनियोजन गरी काम सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले बताए ।
उता ईस्मा गाउँपालिकाले पनि खरका छाना भएका घरहरुको लगत संकलन गरी काम सुरु भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले बताए । उता मुसिकोट नगरपालिका भित्रका खरका छानामा टिनको छाना लगाई दिन यस आर्थिक वर्षमा ५० लाख छुट्टाईएको मेयर सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।
साविकको अर्लाङ्गकोट गाविसको उर्लेनीस्थित दलित वस्तीमा मात्रै ३० लाख छुट्टाएको उनले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष साविकको मुसिकोट कोटा मुनिका दलित लगायतका स्थानका दलित र कुमाल वस्तीमा प्रति घरधुरी एक लाख बरावरको जस्ता पाता र अन्य आवस्यक सामग्री दिईने छ ।
आगमी वर्ष देखि थप वस्तीमा काम सुरु गरिने छ । मेयर सापकोटाले आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि घरमा बत्ती बोल्न नसकेको भए र कोही भुमिहिन भए सिधै आफु कहाँ आउन त्यस्ता जनतालाई आउन आग्रह समेत गरेका छन् ।
अव केहि दिन भित्रमै उज्यालो मुसिकोट बनाउने अभियानमा जुटेका उनले सोलरबाट भए पनि हरेक घरधुरीमा उज्यालो दिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । जस्ताको छानोमा उज्यालो घर पाउने भए पछि यी तिन वटै स्थानिय तहका लाभान्वित हुने जनताले वर्षऔं पछि असली सरकारको अनुभुति गरेको बताए ।
अन्य स्थानिय तहमा पनि यस्तो कार्य गर्ने तर्खरमा रहेको जनाईएको छ । स्थानिय तहको निर्वाचन पछि जनप्रतिनिधीहरुले सुशासन र विकास को भन्दा को कमको प्रतिष्पर्धामा अगाडी बढाएका छन् ।
रक्तिम साँस्कृतिक अभियान कतारले देउसी भैलो कार्यक्रम गर्ने